Heshiis Laga Gaadhay Colaaddii Ceel Afweyn iyo Go’aamo Laga Soo Saaray | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ceel Afweyn (SDWO): Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed, iyo guddida golaha guurtida ee arrimaha nabadaynta u jooga degmada Ceel-afwayn ayaa go’aamo ka soo saaray shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Darar-weyne.
Cid kasta oo gooysa naf si badheedh ah oo ay ku caddaato, waa in loo dilo. Waxaa reeban gacansiinta gacan ku dhiiglaha, la safashada, sidoo kale fakinta, cid kasta oo ay ku caddaatana waxa la horgeynayaa maxakabad.
Dawlada ayaa masuul guud ka ahaanaysa nabadgelyada shacabka jamhuuriyada Somaliland, gaar ahaan deegaanada dhibku ka dhacay ee labada beelood wada degaan go’aamadanina ay saameeyaan kuwaas oo kala ah, degmooyinka Ceel Afweyn, Darar-weyne, Garadag iyo Bohol.
waxaa mamnuuc ah in shaqsi ama wadar hubaysani ay la soo gasho magaalo, tuulo, ceel iyo meel kasta oo bulsho isugu timaado, waxaana tallaabo ka qaadaya ciidanka.
Gaadiidka ay ku caddaato in loo isticmaalayo abaabul dagaal, guris ciidan, taakulo, raashin, saad iyo saanad dagaal waxa la wareegaya dawlada jamhuuriyada Somaliland.
Aaska 15 kii qof ee ku dhintay waxa laga bixinayaa midkiiba $ 1000 oo lagu bixinayo 11/3/2016 , jifida oo dhan 33 halaad waxa lagu bixinayaa mudo laba bilood ah oo ka bilaabmaysa 11/3/2018 kuna eeg 11/5/2018.
Inta kale ee hadhsan waxa lagu bixinayaa muddo 12 bilood ah gudahood oo ka bilaabmaysa 11/5/2018, kuna eeg 11/5/2019.